[Chronicle] Rugby: murqaha murugsan ee Springboks - JeuneAfrique.com - KU SII SAAR
ACCUEIL » COMPANY [Dib u eegista] Rugby: murqaha murugsan ee Springboks - JeuneAfrique.com
Naadiyada rugby-ta Koonfur Afrika si aan caadi ahayn ayaa loo dhisay? Muranka ayaa waxaa sii fogeeyay sawir yaab leh iyo geeri dhicis ah ...
Waxaa la sii daayay maalmo kahor, cliché wuxuu u egyahay jilibka adduunyo culeys culus. Hase yeeshe natiijada ciyaartooyda leh muruqyada xaddidan lama bixiyo si kor loogu qaado birta. Ciyaartooydan u muuqda kuwa jir dhisaya waxay ka tirsan yihiin kooxda la naaneeso guga 'Springboks'. Sawirka, torsos qaawan, Koonfur Afrika rugbymen faashad banooniyo ah ilaa heer ay ku kiciso xiisa badan oo leh dareenno kaladuwan: xiisaha ay u qabaan taageerayaasha rappers ee xun ee octagons, cabsida dadka ka soo hor jeeda ee isku diyaarinaya. in lagu wajaho iyaga labo toddobaad gudahooda Koobka Adduunka ee Japan ... shakiga sidoo kale.
Xaqiiqdii, si loo miisaamo cabirka, ciyaartoyga rugby wuxuu caado u leeyahay qoorta dibi. Xaqiiqdii, habka tartanku ugu sarreeya wuxuu dhiirigelinayaa in uu sifiican u xiirto silhouettes-ka "go 'go'aamiyay" muruq "iyo dabacsanaan aan xad dhaaf lahayn ee karbohaydraytyada. Xaqiiq ahaan, sawirka waxaa la qaaday ka dib fadhigii uu dalbaday tirada ugu badan. Laakiin dhammaantood waa isku mid, dabeecadda muuqaalka leh ee muruqyada aan dhimanayn waxay u gudbineysaa shaashaddan la hubo ee heesaha photomontage. Oo halkan waxay ku bilaabataa raaxo la'aanta ...
Haddii qishku uusan kombiyuutar ahayn, ma meel kale baa? Laba dood ayaa kicisa shakiga. Marka hore, illaa 15 shaqsiyaad ayaa wali leh dheef-shiid kiimikaad oo kala duwan oo ay tahay inay bixiyaan muuqaal yar oo isku mid ah, muruqyo ah. Marka labaad, tuhunka tuur-gooye digaag ah wuxuu gelinayaa muuqaalka masiirka halyeeyada 'Springboks' ee 1995.
Horyaalkii adduunka, kooxdii ka dambeeysay midabtakoorka ayaa ka koobnaa ciyaartooyyiin maanta intooda badan ku nool meelahooda. Laakiin afar xubnood oo ka mid ah kooxdii guuleysatay ayaa horeyba u dhintey: Ruben Kruger da'da 39, Joost van der Westhuizen ee 45, James Small - xagaagan - bilowga konton konton, iyo Chester Williams, oo ah ciyaaryahanka kaliya madow oo ka mid ah xulashada markaa, wuxuu dhintay Jimcihii la soo dhaafay sannadihii 49.
Shaki laga shakiyey
Xiriir la leh dhibaatooyinka wadnaha iyo cudurada naadirka ah - kansarka maskaxda iyo cudurka Charcot - waayitaannadaasi ma noqon karaan, daqiiqada, loo aaneeyey isticmaalka maandooriyaha sharci darrada ah. Laakiin ciyaartooyda isboortiga, sida cayaaryahanka rugby-ka Koonfur Afrika Juan Pienaar, waxay ku sifeeyaan cayaaraha gaangiyada ee "pillboxes" South Africa horaantii 1990 sano. Kadib waxaan u nimid wax kasta oo shaki ah: sababta dhimashada ama qalooca murqaha la yaab leh. Si rasmi ah, qaadista doping ayaa ku dhowaad laga tirtirayay cawska tan iyo markii la hirgaliyay kontoroolka ugu horreeya ee 1992 ...
[Tribune] Horumarka Afrika wuxuu mari doonaa xoreynta haweenka - JeuneAfrique.com